Wed, Mar 20, 2019 | 15:19:40 NST
12:47 PM ( 1 year ago )
अक्षयकुमारको फिल्म ‘प्याडम्यान’ को ट्रेलर र फिल्मसँग सम्बन्धित अन्तर्वार्ता हेरेँ । अक्षयले धेरै अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, भारतमा ८२ प्रतिशत महिलालाई महिनावारीका क्रममा प्रयोग गरिने स्यानिटरी प्याडबारे थाहा नै छैन । तीमध्ये केहीलाई यसबारे थाहा भएर पनि प्याड किन्नका लागि पैसा छैन । धेरै महिलाहरु अझै पनि महिनावारीको क्रममा खरानी, भुस्सा, सुकेका पात अनि माटोको प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।
यो सुन्दा मेरो शरीर नै सिरिङ्ग भयो । अनि सोचेँ हाम्रै देशका महिला जो स्यानिटरी प्याडबारे अनविज्ञ छन् वा जो आर्थिक रुपले कमजोर छन्, उनीहरुले पनि त महिनावारीका बेला यस्तै विकल्प अपनाइ रहेका होलान । सुन्दा त यस्तो लाग्छ भने जो ती सबै कुरा प्रयोग गर्न बाध्य छन, उनीहरुको अवस्था कस्तो होला ?
अहिले भारतमा भारतीय कलाकारहरुले हातहातमा स्यानिटरी प्याड समातेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिरहकेका छन । यसबाट एकातिर उनीहरु फिल्म ‘प्याडम्यान’को प्रचार गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर महिनावारीकाबारे जनचेतना फैलाईरहेका छन् । कुनै पसलमा गएर स्यानिटरी प्याड खरिद गर्दा पसलले पत्रिकाले छोपेर, कालो प्लाष्टिकमा बेरेर लुकाएर दिने अनि लिँदा पनि कसैले देख्ला कि भनेर हतार हतार ब्यागभित्र राख्ने प्रवृत्ति छ । अब यसबारे डराएर, लुकेर हुँदैन । जसरी घरमा आवश्यक दुध, चिनी, चामल, कोलगेट मागिन्छ त्यसरी नै ढुक्क भएर प्याड किन्ने र यसबारे खुलेर बोल्नका लागि कलाकारहरुले आवाज उठाइरहेका छन ।
‘प्याडम्यान‘का नायक अक्षय कुमार लगायत भारतका धेरै कलाकारले भारत सरकारसँग स्यानिटरी प्याडमा लगाइने ट्याक्स हटाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन । सकेसम्म महिलाहरुका लागि सरकारले निःशुल्क रुपमा प्याड दिईनु पर्छ भन्ने माग उनीहरुको छ ।
यही कुरा नेपालमा पनि गर्न आवश्यक छ । किनकी महिनावारीको कुरा गर्नु लाजको कुरा होइन । यसबारे सबैैले लुकेर होइन, खुलेर कुरा गर्नुपर्छ । अब सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट महिनावारी र यस समयमा महिलाले प्रयोग गर्नुपर्ने प्याडको कुरा गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालमा एउटा सामान्य एक प्याकेट प्याडको मूल्य ५५ रुपैयाँ पर्छ । ५५ रुपैयाँ पर्ने सबैभन्दा सस्तो प्याकेट जसमा जम्मा आठवटा मात्रै प्याड हुन्छन । जबकी महिनावारीको त्यो पाँच दिनसम्म प्रयोग गर्न आठवटा मात्रै प्याडले पुग्दैन । तसर्थ आर्थिक रुपले कमजोर महिलाहरुलाई प्याडबारे थाहा भए पनि स्यानिटरी प्याडको प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । किनकी महिनावारीको बारेमा कुरा सुन्न त नचाहने समाजमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका महिलाले मलाई प्याड किनिदिनु भनेर कसरी भन्न सक्छे ? अनि एकजना आमाले छोराछोरीको पेट भर्नका लागि खर्च जुटाउने कि महिनावारीका लागि प्याड किन्नको लागि ? त्यसपछि प्याडको विकल्पमा पुराना कपडालाई बारम्बार दोहोर्याएर प्रयोग गर्नु बाहेकको विकल्प उसँग हुँदैन ।
शहरमा बस्ने शिक्षित परिवारका महिलाहरुलाई त चार दिनसम्म भान्सा, पूजाकोठा, धारा, ईनारबाट टाढै राखिन्छ भने गाउँघरतिरको अवस्था झनै नाजुक छ । महिनावारीलाई यति हेयका दृष्टिले हेरिन्छ । यस्तो बेला सरसफाईमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कमैलाई थाहा छ । स्वयम् महिलाहरु नै महिनावारीको बेला गर्नुपर्ने सरसफाईबारे जानकार छैनन् ।
विद्यालय जाने केही किशोरीले प्याडबारे सुनेका त होलान्, तर विद्यालयको पहुँचबाट टाढा रहेका किशोरी तथा महिलाहरुलाई यसबारे थाहा नै छैन । बिद्यालय जानबाट बञ्चित किशोरी तथा ४०/४५ वर्षका कयौं महिलाले स्यानिटरी प्याड देखेका पनि छैनन् होला । उनीहरु आफ्नै हिसाबले महिनावारीको चार पाँच दिनसम्म बग्ने रगतलाई जसरी तसरी ढाकछोप गरेर बस्न बाध्य छन् ।
महिनावारीका बेला जे प्रयोग गरेपनि त्यो बाहिर भन्नु वा रगत को दाग देखिनु भनेको हाम्रो समाजमा लाज र शरमको कुरा मानिन्छ । त्यसैले धेरै महिलाहरु न त यसबारे कसैलाई भन्न सक्छन्, न त महिलाहरुका लागि काम गर्ने संघसंस्था, व्यक्ति वा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले महिलाहरुको लागि महिनावारीको बेला प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याड दिनु वा प्रयोग गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरामा जोडदार रुपमा आवाज उठाएका छन् ।
तसर्थ अब हरेक व्यक्ति, समाज, सम्बन्धित निकायले महिनावारीका बेला गर्नुपर्ने सरसफाई तथा जनचेता जगाउनका लागि विशेष कदम उठाउन जरुरी छ । अनि त्यत्तिकै जरुरी छ स्यानिटरी प्याडको महिलासम्म पहुँच बढाउन पनि । सकेसम्म ग्रामिण क्षेत्रका महिलालाई निःशुल्क प्याड वितरण गर्नु आवश्यक छ । त्यो गर्न नसके ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सामान्य परिवारको महिलाले किन्न सक्ने मूल्यमा स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउन सक्यो भने मात्रै पनि महिलाहरुले भोग्दै आएका समस्या कम हुने थिए । यसो गरेमा महिनावारीमा सरसफाईको कमीले गर्दा हुन सक्ने जोखिमबाट महिलालाई बचाउन सकिन्छ ।
हाम्रो समाजले अहिलेसम्म सबै महिलाहरुलाई महिनावारीको बेला यो गर्नुहुन्न, त्यो गर्नुहुन्न भन्दै महिनावारी हुँदा हुँदैन भनेकाे काम गर्नु भनेको पाप हो, वा खराब प्रकृया हो भन्ने जस्ता अन्धविश्वासको जग बसालिदिएको छ । तर अब सबैले महिनावारीको बारे के गर्नु जरुरी छ, यसबारे कुरा गर्नु आवश्यक छ । यो प्राकृतिक कुरा हो । यदि महिलामा महिनावारी नै नहुने हाे भने यो संसारमा मानव सृष्टि नै रोकिन्छ ।
यस्तो बेला सरसफाईमा ध्यान दिन, स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा सबैले बोल्न जरुरी छ । सुरक्षित स्यानिटरी प्याड देशका हरेक ग्रामिण क्षेत्रमा सर्वसुलभ रुपमा महिलासम्म पुर्याउनका लागि पहिलो महत्वपूर्ण कदम सरकारले नै चाल्नु पर्छ ।